सामान्य मानिसलाई समेत सफल सीईओ बनाउने बानी | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी सामान्य मानिसलाई समेत सफल सीईओ बनाउने बानी
सानो बालकलाई तिमी ठूलो भएर के बन्छौं भनेर सोध्दा उसले कस्तो उत्तर देला ? कसैले डाक्टर बन्छु भन्लान् अनि कसैले पाइलट । कसैले इञ्जिनियर अनि कसैले शिक्षक । आफूलाई जे गर्दा खुशी लाग्छ त्यही गर्छु भन्ने उत्तर आउँछ । भविष्यमा म कुनै कम्पनी चलाउँछु वा सीईओ बन्छु भनेर बताउनेको सङ्ख्या हाम्रो परिवेशमा अलि कम नै छ । तैपनि, अहिले सफल भएका सबै सीईओले सानै उमेरमा आफू सीईओ नै बन्छु भन्ने ठानेर राम्रो पढाइ गर्छन् भन्ने आम धारणा छ । सीईओ शक्तिशाली र शिष्ट हुन्छन्, हिम्मतिला हुन्छन्, तिनीहरू बहिर्मुखी हुन्छन् र तिनीहरूको बायोडाटामा कतै केही त्रुटि हुँदैन भन्ने सोच हामीमध्ये धेरैको छ ।
आफूमा यस्ता गुण नपाउँदा म त सीईओ मटेरियल नै होइन रहेछु भन्ने सोच धेरैको हुन सक्छ । तपाईं पनि यस्तै सोच्नुहुन्छ भने तपाईं पूर्णतः गलत हुनुहुन्छ । अहिले सफल भएका सीईओलाई आफू भविष्यमा सीईओ नै बन्छु भन्ने थाहा नै थिएन भन्छन् ‘द सीईओ नेक्ष्ट डोर’ पुस्तकका लेखकद्वय एलेना बोटेल्हो र किम पावेल । साधारण मानिसहरू पनि सीईओ बन्न सक्छन् । तर, यसका लागि केही बानी भने अपनाउनुपर्छ भन्छन् बोटेल्हो र पावेल । सफल सीईओ बन्न केकस्ता बानीव्यवहार हुनुपर्ने रहेछ भनेर यिनीहरूले अनुसन्धाता संस्था जीएचस्मार्टसँग भएका १७ हजार लिडरशीप एसेसमेण्ट तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेका थिए ।
युनिभर्सिटी अफ सिकागो र कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरूसँगको सहकार्यमा थप विश्लेषणका लागि तिनीहरूले २ हजार ६ सय सीईओको तथ्याङ्क लिएका थिए । यस क्रममा हामीजस्तो समान्य मानिसलाई समेत सीईओ बनाउन मद्दत गर्ने चार साधारण व्यवहार फेला परे । ती व्यवहार केके होलान् ?
१. निर्णय छिट्टै लिने :
तथ्याङ्कअनुसार सफल सीईओहरूमा छिट्टो निर्णय लिने बानी हुन्छ । साधारण मानिसको तुलनामा यिनीहरूको हाई पर्फर्म हुने सम्भावना १२ गुणा उच्च हुन्छ । तत्कालै निर्णय लिन सक्ने बानी किन महŒवपूर्ण छ भन्ने राम्रा उदाहरण हुन् ग्रेहाउण्डका पूर्व सीईओ स्टेभ गोर्म्यान । सन् २००३ मा गोर्म्यानले ग्रेहाउण्डको जिम्मेवारी लिएका थिए । त्यतिबेला कम्पनी घाटामा चलिरहेको थियो । टाट पल्टिने स्थितिबाट भर्खरै बाहिर आएको ग्रेहाउण्डको मातृकम्पनीले ग्रेहाउण्ड बन्द गर्ने योजना बनाइरहेको थियो ।
शुरूमा गोम्र्यानले कम्पनीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेबारे आफ्ना शीर्ष कार्यकारीहरूका योजना सुनिरहे । तर, ती कुनै योजना कार्यान्वयनमा आएनन् । ४ महीनासम्म पनि यस्तै क्रम चलिरहेपछि अब त अति भयो भनेर उनी आफै कम्पनी बचाउन लागि परे । यस क्रममा गोम्र्यान र उनको टीमले विभिन्न तथ्याङ्क केलाए । यसमा अमेरिका र क्यानडाको सेटलाइट नक्सा पनि थियो । उक्त नक्साले देशका सर्वाधिक जनघनत्व भएका स्थानहरू देखाएको थियो । उनले तत्कालै ग्रेहाउण्ड बसको रुट बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रतिर सारे । आफ्नो योजनाले काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा गोर्म्यान आफैं पनि सुनिश्चित थिएनन् । तर, आए आँप गए झटारो भन्ने उनको रणनीति सफल भयो ।
गोर्म्यानले सन् २००७ मा ग्रेआउण्ड छाडे । त्यतिबेला कम्पनीले ३ करोड डलर मुनाफा कमाएको थियो । अन्ततः कम्पनी सन् २००३ को मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा विक्री पनि भयो । गोम्र्यानले आफ्नो योजना अगाडि बढाउनुको कारण भित्री मनमा सो योजनाले काम गर्छ भन्ने थिएन । कुनै निर्णय नै नगर्नुभन्दा खराब नै भएपनि निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सोच थियो ।
२. आफ्नो ‘आइडिया’प्रति अरूको समर्थन जुटाउने
सफल सीईओ बन्न आफ्ना कर्मचारीलाई काममा ‘इनगेज’ गराइरहन सक्ने खूबी हुनुपर्छ । उनीहरूलाई राम्रो नतीजा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, यो भनेको अरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुजत्तिको सजिलो काम भने होइन । कर्मचारीको चित्त नदुखाउने जाती सीईओ बन्दा कम्पनीलाई उल्टै घाटा हुन सक्छ । अनुसन्धाताका अनुसार यस्तो सीईओले कर्मचारीलाई गुणस्तरीय नतीजा दिन लगाउनेभन्दा उनीहरूले जे गरे पनि हो मात्रै भन्छन् । आफ्ना कुरा/आइडियाप्रति अरूको समर्थन पाउन, अरूलाई यसमा विश्वास गर्न प्रेरित गर्न तीनओटा उपाय अपनाउन सकिन्छ :
क)आफ्नो दृष्टि र लक्ष्य अरूलाई प्रष्टसँग भन्नुपर्छ । आफ्नो उद्देश्य के हो भन्नेबारे अरूसामु स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ ।
ख)लक्ष्य प्राप्त गर्न आफू लाई मद्दत गर्ने मानिस/कर्मचारीहरूको भावनात्मक, आर्थिक र भौतिक आवश्यकता राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।
ग)सम्बन्ध विकासलार्ई दैनिक दिनचर्याको भाग र बानी बनाउनुपर्छ ।
अमेरिकी बहुराष्ट्रिय स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पल इङ्कका स्वर्गीय सीईओ र संस्थापक स्टिभ जब्सको नाम तपाईंले सुन्नु नै भएको छ । सफल सीईओको अग्रपङ्क्तिमा जब्सको नाम आउँछ । एप्पल बजार पूँजीकरणका हिसाबले विश्वकै ठूलो कम्पनी हो । आफ्ना कर्मचारीलाई व्यस्त राख्न मात्रै होइन उनीहरूलाई नयाँनयाँ प्रडक्ट, आइडिया ल्याउन समेत जब्स सधैं प्रेरित गर्थे । कतिपय मामिलामा त जब्स कर्मचारीप्रति निर्दयी नै थिए भन्छन् कोलम्बिया बिजनेश स्कुलमा व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक बिल्ली पिटर्सन । तर, मानिसहरूले उनको यो अवगुण पनि बेवास्ता गर्थे । किनकि, उनी निकै प्रतिभाशाली थिए । जब्ससँग कुनै ‘ब्रिलियण्ट आइडिया’मा काम गरिरहेको छु भन्ने रोमाञ्चकता र उत्साहमा उनको क्रुरतालाई बिर्सिदिन्थे ।
३. सधैं समान नतीजा दिने
सधैं एउटै खालको नतीजा दिने र हरेक योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सीईओलाई निकै भरपर्दो सीईओका रूपमा हेरिन्छ । कुनै पनि सीईओमा यस्तो गुण छ भन्ने थाहा भएपछि अन्य कम्पनीमा उनीहरू नियुक्त हुने सम्भावना दोब्बर हुन्छ । सफल सीईओमा अत्यावश्यक चार गुणमध्ये यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो । यस्तो बानीले व्यक्तिलाई सधैं राम्रो प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्छ । सीईओ बजारमा भरपर्दो र निपुण व्यक्तिको बढी खोजी भइरहन्छ भन्छन् बोटेल्हो र पावेल । यस्ता सीईओलाई विश्वास गरेर कम्पनीमात्र होइन क्लाइण्टहरू पनि जोखीम मोल्न तयार हुन्छन् । तिनीहरूलाई अवसर पनि बढी नै दिन्छन् ।
भर्जिन ग्रूपका संस्थापक रिचर्ड ब्रान्सनले यस्तै बानी भएका आफ्ना एक कर्मचारीको सल्लाह मानेर नै भर्जिन अष्ट्रेलिया खडा गरेका हुन् । अहिले यो कम्पनी अष्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो विमान सेवा कम्पनी बनेको छ । भर्जिन अष्ट्रेलिया लञ्च गर्ने विचार ब्रेट गडफ्रेको हो । गडफ्रेको कामप्रतिको निष्ठा (वर्कएथिक) देखेर ब्रान्सन यति प्रभावित थिए कि अष्ट्रेलियामा विमान कम्पनी खोल्ने उनको सल्लाह मानिहाले । सन् २००० मा भर्जिन अष्ट्रेलिया खोल्दा गडफ्रे यसका सीईओ थिए । उनले सन् २०१० सम्म उक्त कम्पनीको सीईओका रूपमा काम गरे । आफ्नो पछिल्लो आत्मकथा ‘फाइण्डिङ माई भर्जिनिटी’मा ब्रान्सनले गडफ्रेबारे निकै कुरा लेखेका छन् । पुस्तकमा गडफ्रेलाई उनले आकर्षक, हरेक ससाना कुरामा ध्यान दिने र मिहिनेती व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
४. परिस्थितिअनुरूप ढल्ने
शिखरमा पुग्ने हो भने कहिल्यै नहिँडेको बाटोमा हिड्न जान्नुपर्छ । कोडाक, ब्लकबष्टर र बोर्डर्स कुनै समयका सफल कम्पनी थिए । तर, यी कम्पनीका सीईओहरूमा परिस्थितिअनुरूप ढल्न सक्ने खूबी नहुँदा कम्पनी नै असफल भए । असहज परिस्थितिलाई समेत सहजताका साथ अपनाउने सीईओहरूले अप्ठ्यारो स्थितिमा समेत सहज महसूस गर्छन् । नयाँ चिज अपनाउन, परिवर्तन गर्न असहज भएपनि यसबाट पाठ सिकिन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले राम्ररी बुझेका हुन्छन् । यस्ता सीईओले विगतका कुरालाई उहिलेको कुरा खुइले भन्ने हिसाबमा लिएर भविष्यबारे मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न जानेका हुन्छन् ।
अमेरिकी बहुराष्ट्रिय अनलाइन खुद्रा कम्पनी एमेजनका संस्थापक तथा सीईओ जेफ बेजोस पनि यस्तै थिए । सन् १९९४ मा बेजोसले एमेजन डटकम शुरू गर्दा कम्पनीले पुस्तकमात्रै बेच्थ्यो । त्यसपछि ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया बुझेर यसमा बेजोसले गीतसङ्गीत र भिडियो राखे । अहिले यो सूची निकै लामो छ । अहिले कम्पनीले विद्युतीय सामग्रीदेखि लत्ताकपडासम्म हरेक वस्तु बेचिरहेको छ । टेलिभिजन शोसमेत बेच्न थालेको कम्पनीले आफ्नै डेलिभरी सेवा शुरू गर्ने योजना बनाइरहेको छ । दीर्घकालीन सोच राख्ने र नवीन प्रयोग गरिरहने बेजोसको बानीकै कारण एमेजनले यति ठूलो सफलता हात पार्न सकेको हो ।